[Fandikan-teny] Fahadisoam-panantenan’ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2018 4:51 GMT
Nahita ny ankamaroan'ny tetikasa Rising Voices fa tsotra ny dingana ny fanazarana ny olona amin'ny fomba famahananm-bilaogy. Ahafahana manangana bilaogy vaovao haingana sy tsotra tahaka ny manangana kaonty mailaka vaovao ny tolotra tahaka ny WordPress sy Blogger. Na dia izany aza, nisy ireo andro izay tsy nety niara-niasa ny teknolojia sy ny hafainganam-pandehan'ny aterineto. Omaly ohatra, namaritra ny zava-niainany nandiso fanantenana tao amin'ny cyber-cafe iray ao El Alto ny mpandray anjara iray amin'ny Voces Bolivianas, Cristina Quisbert (izay mibilaogy amin'ny teny Anglisy ato) raha niezaka namoaka ny sary tao amin'ny kamera nomerikany izy.
Nitondra sary tamin'ny tsofoka USB, ary te-hanoratra mikasika lohahevitra iray, ka niditra cyber aho. Nipetraka aho ary vonona ny hanoratra. Tsy nandeha tao amin'ny kitendry ny litera ‘t’. Naveriko imbetsaka fa tsy nety. Tsy mety mandeha ihany koa ny tarehintsoratra lehibe sy ny bokotra hafa.
“Afaka miova milina ve aho?” Hoy aho tamin'ilay mpiasa. “Eny”, hoy izy, niova solosaina hafa aho. “Mandeha ny fanatsofohana USB?” Hoy aho nanontany. “Eny” hoy izy namerina. Niditra aho ary mandeha tahaka ny sokatra ilay solosaina. Niova solosaina indray aho, nandeha tsy nisy olana tamin'ity indray mitoraka ity. Nanoratra aho ary rehefa nanatsofoka ny USB, dia tsy nandeha izany. Tsy mandeha ve ny fampidirana USB? Hoy aho nanontany. “Tsy mandeha, simba io iray io”, hoy ilay mpiasa.
Mateti-pitranga ny zavatra tahaka izany. Hihatsara izany indray andro any.
Soa ihany fa nahita solosaina ampiasaina i Cristina nony farany, izay amoahany ireo sary mahafiaritra avy ao Copacabana ao amoron'ny Farihy Titicaca.